सुन तस्करीः नियन्त्रणभन्दा बरामदतर्फ प्रहरीको चासो | PARDAFAS
सुन तस्करीः नियन्त्रणभन्दा बरामदतर्फ प्रहरीको चासो
Posted: August 31, 2013 in By Deepak Kharel
सुन तस्करीका अधिकांश काण्डमा मुख्य तस्कर उम्किएको र भरिया मात्रै पक्राउ परेको पाइएको छ। सुनको मुख्य तस्कर तथा योजनाकारलाई खोजबिन गरी कारबाहीको घेरामा ल्याउनेतर्फ प्रहरीको प्रयास पनि प्रभावकारी देखिँदैन।
अवैध सुन बरामद गर्दा प्राप्त हुने २५ प्रतिशत कमिसनका कारण प्रहरीको चासो र सक्रियता तस्करी नियन्त्रणभन्दा पनि बरामद गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेको पछिल्ला केही पछिल्ला केही प्रकरणले पुष्टि गर्छ। यस्तो गुनासो आउन थालेपछि गृहमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई तस्करी रोक्‍न कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्। प्रहरीले अवैध सुन बरामद गर्न व्यापक सुराकी परिचालन गर्ने गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले २०६९ साउनमा एक किलो सुनसहित कलंकीबाट पिताम्बर पासवानलाई पक्राउ गर्‍यो। पासवानले बरामद भएको सुन वीरगन्जका सुन व्यापारी प्रभु सर्राफको भएको बयान दिए तर सर्राफलाई सोधपुछसमेत गरिएन। बरामद सुन जफत गरियो। सुन बोक्ने पासवान धरौटी बुझाउन नसक्दा थुनामा छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले २०६९ पुसमा धुलिखेलबाट दुई किलो सुन बरामद गर्‍यो। सुन बोक्ने गाडी र सुन मात्र विभागको टोलीले हात पार्‍यो, अरू सबै फरार भएको भनियो। ०६९ पुसमै ब्युरोको टोलीले काठमाडौंको बौद्धबाट पाँच किलो सुनसहित दीर्घबहादुर थापा र समीर बराकोटीलाई पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझायो। तर एकाएक सुन आफ्नो भएको दाबीसहित पेम्बा दोर्जे विभागमा पुगे। दोर्जे थुनामा छन् तर सुनसहित पक्राउ परेका थापा र बराकोटीमाथि कुनै अनुसन्धान भएन।
जेठ २ गते महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाको विशेष टोलीले जुत्ताको तलुवामा लुकाएर तस्करी गरिएको १६ किलो सुनसहित बौद्धबाट पक्राउ परेका सानु शेर्पा, नाम्गेल शेर्पा, ज्ञाने शेर्पा, सोनम शेर्पा र सुन लिन जाने भारतीय नागरिक गाल्पो भुटिया बिगोबमोजिम धरौटी बुझाउन नसक्दा थुनामा छन्।
ब्युरोले हालसम्मकै धेरै ३५ किलो सुनसहित चारजनालाई असार २६ गते पक्राउ गर्‍यो। चीनको खासाबाट काठमाडौं आएको कन्टेनरमा लुकाइएको अवस्थामा ३५ किलो सुन बरामद भएको थियो। ब्युरोले सुनसहित पक्राउ गरेका चालक निमाछिरिङ तामाङको बयानका आधारमा सुन तस्करीका मुख्य आरोपी ग्याङ्जो लामा, मोहनकुमार अग्रवाल र नाङ्गेल भन्ने ओमबहादुर बज्राचार्यलाई पक्राउ गरेर सोही दिन राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझायो। विभागले पक्राउ परेकासँग सुनको बजारमूल्यबराबर जनही तीन करोड ७४ लाख रुपैयाँ बिगो जरिबानाको फैसला गर्‍यो। लामा विभागको फैसलाविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा गए। न्यायाधिकरणले लामालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो। न्यायाधिकरणको फैसलाविरुद्ध विभागले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
ब्युरोका प्रमुख नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रकाश अर्यालले सुन तस्करीमा समातिएका अभियुक्तलाई २४ घन्टाभित्र राजस्वमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले विस्तृत अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भएको बताए। विभागका निर्देशक भरत सुवेदीले विभागलाई पक्राउ परेका अभियुक्तसँग सोधपुछ मात्र गर्ने अधिकार रहेको बताए। ‘समातिएका अभियुक्तले जेजे बोल्छन्, त्यसैलाई आधार मानेर भन्सार ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाउने हो’, उनले भने।
त्यस्तै काभ्रेबाट बरामद ९ किलो सुनको घटनामा पनि भरियामात्र पक्राउ परेका थिए। साउन १४ गते सुन काठमाडौं आउँदै गरेको सूचना पाएर परिचालित प्रहरीले सुन बरामद गर्न सकेन, बरु आफ्नै दुई जवानलाई सुन लुट्नेलाई सघाएको आरोपमा कारबाही अगाडि बढायो। काभ्रेमा सुन लुटिएको हो तर कति लुटियो र कसले लुट्यो भन्नेबारे प्रहरी अधिकारी अन्योलमा छन्।
महानगरीय प्रहरी आयुक्त एआईजी नवराज ढकाल सुन तस्करीको सूचना आउनासाथ प्रहरी परिचालन भएको बताउँछन्। ‘सुन लुटिएको दाबी कसैले नगर्दा अनुसन्धानमा कठिनाइ भएको छ’, ढकालले भने, ‘परिसरका प्रहरी जवान र लुटेरा हिरासतमा छन्। अनुसन्धान हुँदैछ।’
सुन लुट्न सहयोग पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले जवान नारायण थापा र राजकुमार माझीलाई हिरासतमा राखेको छ। सुन लुट्ने दूधराज तामाङ, सुनिल तामाङ, सन्चमान तामाङ, मानबहादुर तामाङ, रवि श्रेष्ठ, पुरन लामा र रमेश तामाङलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
काठमाडौंबाट बंगलादेश पुगेको विमानमा एक सय २४ किलो सुन बरामद भएको घटना र प्रहरीकै मिलोमतोमा सुन लुटिएको घटना सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले सुरक्षा बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई सुन तस्करी रोक्‍न कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।
गृहसचिव नवीन घिमिरेले सुन तस्करीका दुवै घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए। ‘अनुसन्धान हुँदैछ। त्यसैले धेरै कुरा भन्न मिल्दैन’, घिमिरेले भने।
अपराध महाशाखा र ब्युरोले काभ्रेमा सुन लुटिएको घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
डीआईजीको रिपोर्ट- अन्यत्रबाटै ढाकामा सुन पुग्यो
काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोपाल भण्डारीले बंगलादेश पुगेको एक सय २४ किलो सुन नेपालबाट नगएको लिखित प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
विमान बंगलादेशको २४ जुलाई २०१३ को काठमाडौं-ढाका उडानमा जहाजको कार्गो प्यानलमा प्याक गरिएको सुन ढाका पुगेपछि त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले बरामद गरेका थिए। सुन तस्करी भएको पुष्टि भए पनि तस्कर को हो भन्ने ढाका प्रहरीले खुलाउन सकेको छैन। बेवारिसे अवस्थामा जहाज राख्ने ह्यांगरमा सुन बरामद भएको थियो।
डीआईजी भण्डारीले नेपालबाट नभई अर्कै मुलुकबाट उक्त सुन ढाका पुगेको हुनसक्ने प्रतिवेदन दिएका छन्। तर उनको अनुसन्धानले कुन मुलुकबाट सुन लोड भएर नेपाललाई ट्रान्जिटमात्र बनाइएको हो भन्ने खुलाउन सकेको छैन। नेपाल आउनुअघि उक्त जहाज कहाँ थियो? जस्ता सामान्य कुरासमेत उल्लेख नगरी प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘२४ जुलाई २०१३ मा विमान बंगलादेश एअरमा १२४ केजी सुन बरामद भएको सम्बन्धमा सो सुन यस त्रि.अ.वि. बाट गएको नभई उक्त दिन सो जहाज अन्यत्र कुनै मुलुकबाट लोड भई बंगलादेशको विमानस्थलमा पुगेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।’
त्यस दिन नेपालबाट उक्त जहाजमा वासिङ्टन डीसी, जर्मनी, फिनल्यान्ड र जेनेभाका लागि कार्गो लोड गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी सबै सामानमा एक्सरेबाट परीक्षण गरी सुरक्षा स्टिकर टाँस गरेर पठाइएकाले काठमाडौंबाट सुन नगएको तर्क डीआईजी भण्डारीको छ। उनको प्रतिवेदनमा विमान बंगलादेशकी स्टेसन म्यानेजर श्रीमती सेलिना अख्तर र युनाइटेड एअरवेज बंगलादेशका स्टेसन म्यानेजर सन्तोष खनालसँग सुन प्रकरणबारे बुझ्ने काम भएको उल्लेख छ। यस विषयमा दुवैले काठमाडौंबाट उक्त परिमाणको सुन नगएको दाबी गरेका छन्।
प्रतिवेदनसँगै डीआईजी भण्डारीले उपलब्ध सीसीटीभीको फुटेजसमेत पठाएका थिए। स्रोतका अनुसार विमान बंगलादेशका पाइलटसँग पनि यसबारे कुरा गरिएको थियो तर उक्त कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन। महानगरीय प्रहरी आयुक्त एआईजी नवराज ढकालले डीआईजीको प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि त्यसमाथि पनि बुझ्ने काम भइरहेको छ।’ ढाकास्थित नेपाली दूतावासले सरकारलाई एक पत्र लेखी छानबिन गर्न आग्रह गरेपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी मुख्यालयलाई छानबिनको आदेश दिएको थियो।
काठमाडौंमा भारतीय फौजको सर्च
अख्तियारद्वारा आयल निगमको डिपोमा छापा